Etu esi eme ndepụta ọtụtụ ọkwa na Okwu n'ụzọ dị mfe | Nzukọ mkpanaka
Otu esi eme ndepụta ọtụtụ ọkwa na Okwu n'ụzọ dị mfe
Ignacio Sala | | Okwu Microsoft, Nkuzi
Mgbe ị na -enye ozi na dọkụmentị ka ọ nwee ike ịnweta ya nke ọma, otu nhọrọ kacha mma anyị nwere bụ imepụta ndepụta. Agbanyeghị, mgbe ozi anyị chọrọ igosi dị mgbagwoju anya, nhọrọ kacha mma bụ ịhazi ọdịnaya site na listi ọtụtụ.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata otu esi eme ndepụta ọtụtụ ọkwa na OkwuNa -anwụghị anwụ na -anwa ị nweta ihe kachasị na akwụkwọ Okwu gị, ana m akpọ gị oku ka ị gaa n'ihu na -agụ akụkọ a ebe anyị na -egosi gị ndụmọdụ na usoro kachasị mma iji nweta ọtụtụ n'ime ndepụta Microsoft Okwu.
Site na mgbọ nwere ọtụtụ ọkwa, anyị nwere ike hazie ịdị mma nke ndepụta anyị mepụtara na dọkụmentị, nhazi nke anyị, n'ụzọ, anyị nwere ike. chekwaa dị ka ụdị a ga -eji mee ya ma emechaa n'akụkụ ndị ọzọ nke akwụkwọ ahụ ma ọ bụ n'akwụkwọ ndị ọzọ iji wee nwee otu ihe ịchọ mma.
Ihe mbụ anyị ga -amatarịrị gbasara ọrụ ndepụta ọtụtụ bụ na ha abụghị ihe ọzọ depụtara n'ime listi. N'ụzọ dị otu a, ihe mbụ anyị ga -amụta bụ imepụta ndepụta. Ozugbo anyị mepụtara ndepụta, anyị nwere ike mepụta ndepụta ndepụta n'ime ndepụta, ya bụ, ndepụta ọtụtụ.
1 Otu esi emepụta ndepụta na Okwu
1.1 Otu esi emepụta mgbọ ọhụrụ
1.2 Otu esi emepụta ndepụta na Okwu
2 Otu esi emepụta ndepụta ọtụtụ na Okwu
3 Otu esi agbanyụ ndepụta ndị ahụ
4 Mepụta usoro ndepụta ọhụrụ na ndepụta ọkwa ọtụtụ
Otu esi emepụta ndepụta na Okwu
N'oge mepụta ndepụta na Okwu, anyị nwere nhọrọ abụọ:
Na mbụ dee ederede anyị chọrọ ịtụgharị ka ọ bụrụ ndepụta site na imepụta ihe ọ bụla na paragraf dị iche.
Dee ederede na listi ahụ, ndepụta ahaziri na -akpaghị aka ruo mgbe anyị pịrị igodo Tinye ugboro abụọ ma ọ bụ gbanyụọ nhọrọ ahụ site na rịbọn.
Iji mepụta ndepụta, Okwu na -enye anyị ihe dị iche iche iji hazie ọdịdị ya. Maka nke a a na -akpọ ya vignette.
Akụkụ ọdịnala nke eserese na -egosi mgbe niile bụ isi ma ọ bụ square. Agbanyeghị, site na Okwu, anyị nwere ike iji ihe ọ bụla ọzọ, dị ka rhombus, emoji, akụ, akara gbakwunyere, oghere nwere ndò, akara a hụrụ ...
Otu esi emepụta mgbọ ọhụrụ
Mana ọzọkwa, ọ bụrụ na ọ nweghị nke vignettes nke ngwa ahụ na -enye anyị nke masịrị anyị, anyị nwere ike jiri ihe ọhụrụ site na nhọrọ Nkọwa Bullet.
Na -esote, anyị ga -ahọrọ isi ebe egosipụtara ihe ndị anyị nwere ike iji hazie ihe ịchọ mma nke ndepụta, ịbụ Ọkpụkpụ nku, nku 2 na okpu 3 nhọrọ kacha mma na nke a.
Ọ bụrụ na anyị na -eji otu font iji mepụta mgbọ na -ahụghị ya na sistemụ arụmọrụ nke onye ga -enweta akwụkwọ ahụ, kama a ga -egosipụta akara iju, yabụ ọ bụrụ na nhọrọ a dị, ọ kacha mma ichefu maka nhọrọ a wee jiri mgbọ ala ọ bụla Okwu na -enye anyị.
Na ngalaba nke bu ụzọ, a tụlere m ụzọ abụọ anyị nwere mgbe anyị na -ekepụta ndepụta na Okwu. Dịka ọmụmaatụ anyị ga -egosi gị n'okpuru ma mee ka ihe niile doo anya nke ọma, anyị na -aga hazie ndepụta nke m meburu na mbụ.
Ozugbo anyị mepụtara ndepụta ahụ, ka ịgbakwunye mgbọ na -enye anyị ohere ịmata ọdịiche na ịmata ihe niile dị na ya, anyị na -ahọrọ ederede wee pịa otu n'ime bọtịnụ abụọ na -anọchite anya ndepụta.
Bọtịnụ mbụ gosiri anyị ndepụta site na iji mgbọ egbe.
Bọtịnụ nke abụọ na -egosi anyị ndepụta site na iji nọmba na mkpụrụedemede.
N'ọnọdụ anyị, anyị ga -eji bọtịnụ mbụ anyị ga -ahọrọ mgbọ dị iche karịa nke ahụ Okwu obodo na -enye anyị.
Site na ịpị akụ na -egosi n'okpuru aka nri nke bọtịnụ Bullets, a na -egosi ihe niile anyị nwere ike iji. N'ọnọdụ anyị, anyị ahọrọla akara ngosi na -anọchite anya ihu mwute.
Otu esi emepụta ndepụta ọtụtụ na Okwu
Ozugbo anyị mepụtara ndepụta na Okwu, anyị nwere ike imepụta ndepụta ọtụtụ, ya bụ, ndepụta n'ime ndepụta. Iji gosi otu esi eme ya, anyị ga -eji ederede gara aga.
Ihe mbụ anyị ga-eme bụ họrọ ihe niile dị na listi wee pịa bọtịnụ nke ọ bụla na -anọchite anya mgbo ma ọ bụ ndepụta ọnụọgụgụ, ebe ọ bụ na nhọrọ a dị na menus abụọ ahụ.
Ọzọ, anyị na -ahọrọ n'ime nhọrọ Ndepụta ọtụtụ ọkwa, Ọdịdị dabara nke ọma na ihe anyị na -achọ: naanị ọnụọgụ, ọnụọgụ na mkpụrụedemede ma ọ bụ mgbọ.
Na-akpaghị aka, a ga -agbanwe usoro ndepụta ahụ na -egosi nke anyị họpụtara. Ugbu a bụ oge imepụta ndepụta n'ime ndepụta.
Iji mee nke ahụ, naanị anyị ga -ede n'okpuru ndepụta ebe anyị chọrọ ịmepụta ndepụta ndepụta, pịa taabụ ma anyị ga -ahụ ka esi emepụta ndepụta n'ime ndepụta ahụ. Ọ bụrụ na anyị achọghị ịga n'ihu na -eji ndepụta ndepụta, anyị na -pịa igodo Tinye ugboro abụọ ma ọ bụ anyị na -akwaga na mmewere ọzọ na listi ebe anyị chọrọ imepụta ndepụta ndepụta.
Otu esi agbanyụ ndepụta ndị ahụ
Iji mebie ndepụta ma ọ bụ ndepụta nke ọtụtụ ihe ma ọ bụrụ na ọ dịkwaghị anyị mkpa ịga n'ihu na -abanye ihe na ndepụta, naanị anyị ga -pịa igodo Tinye ruo mgbe egosiri cursor n'aka ekpe nke ihuenyo ahụ.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ihichapụ ndepụta ma ọ bụ ndepụta nke ọtụtụ ihe anyị mepụtara, ihe mbụ ị ga -eme bụ họrọ ederede ebe ndepụta dị wee pịa bọtịnụ na -enye anyị ohere ịmepụta ndepụta na ndepụta nke ọtụtụ ihe. Ọ bụrụ na anyị pịa ya ọzọ, a ga-ahazigharị ederede ahụ ka ọ dị na mbụ.
Mepụta usoro ndepụta ọhụrụ na ndepụta ọkwa ọtụtụ
Ọ bụrụ na ọ nweghị usoro nke Okwu Microsoft na -enye anyị ka anyị mepụta ndepụta na ndepụta nke ọtụtụ, anyị nwere ike mepụta usoro nke anyị, usoro anyị nwere ike chekwaa dị ka ụdị wee tinye ya n'ọrụ mgbe ọ bụla anyị chọrọ. Iji mepụta usoro ndepụta ọhụrụ na Okwu, anyị ga -emerịrị usoro nke m na -egosi gị n'okpuru:
Ihe mbụ anyị ga -eme bụ họrọ ndepụta nke ịchọrọ ịgbanwe.
Na Taabụ ụlọ, N'ime otu Paragraf ahụ, pịa akụ dị n'akụkụ Ndepụta multilevel wee pịa Kọwaa ụdị ndepụta ọhụrụ.
Kpọpụta aha maka ụdị ndepụta ọhụrụ, aha na -enye anyị ohere ịmata ngwa ngwa usoro anyị chọrọ itinye.
Ọzọ, anyị na -abanye nọmba nke ịchọrọ ịmalite ndepụta ahụ (ọ bụrụ na anyị etinyeghị uru ọ bụla, nke a ga -abụ 1).
Na -esote, anyị na -ahọrọ ọkwa nke ndepụta iji tinye usoro ahụ, anyị na -ezipụta nha na ụcha font maka ụdị ndepụta ahụ.
Ọzọ anyị na -ahọrọ akara maka ndepụta ma anyị na -egosi ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịkwaga ntinye ahụ n'aka ekpe ma ọ bụ aka nri.
N'ikpeazụ, anyị na -etinye mgbanwe ndị a Akwụkwọ ọhụrụ dabere na ndebiri a wee pịa OK.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Autlọ ọrụ akpaaka » Okwu Microsoft » Otu esi eme ndepụta ọtụtụ ọkwa na Okwu n'ụzọ dị mfe
Ngwa kachasị mma maka ndị youtubers nke ị ga -eme nke ọma
Ndepụta okwu maka ihe nkiri: ebe ibudata ha yana otu esi ekiri ha